I-Iron oxide pigment, i-Iron oxide etyheli, i-Granular Iron oxide- iShencai Pigment
Umbala we-iron oxide
I-Chrome oxide eluhlaza
Shijiazhuang Shencai pigment mveliso eneemfuno ezizodwa kwimveliso yentsimbi oxide obomvu, intsimbi oxide omthubi, intsimbi oxide omnyama, intsimbi oxide eluhlaza, intsimbi oxide-orenji, intsimbi oxide brown, chromium oxide eluhlaza. Ubugcisa obuluhlaza obuhlaza, i-iron phthalein eluhlaza mveliso, imveliso yonyaka yeetoni ezingama-40000…
I-iron oxide eluhlaza 5605/835
I-iron oxide emnyama 722/750
i-iron oxide etyheli 311/313/920
i-iron oxide ebomvu 110/120/130/180/190
Nxibelelana nathi ukuze ufumane ezinye iisampulu zealbhamu
Ngokweemfuno zakho, ngokusesikweni kuwe, kwaye ikunike wit
Ngeendlela ezintathu zemveliso, amandla emveliso angamawaka eetoni ezingama-50,000
Iqela lakho lobuGcisa ne-R & D kunye neLebhu yeLebhu, usebenzisa izixhobo zovavanyo eziphambili ..
Siya kuba lelona xabiso liphezulu kunye nenkonzo esemgangathweni esemgangathweni sibuyele kubathengi abadala nabatsha.
02 2020 / Novemba
292020 / Julayi
iinkqubo zemveliso oxide yentsimbi ...
I-Iron oxide etyheli yimpuphu ebonakalayo ye-pigment yellow. Ukuxinana kwesihlobo yayiyi-3.5. Iimpawu zeekhemikhali zizinzile. Ubungakanani be-particle ngu-0.01-0.02 μ M. Inendawo enkulu ethile (malunga namaxesha ali-10 e-oxide yesinyithi eqhelekileyo), ukufunxwa ngamandla kwe-ultraviolet, ukumelana nokukhanya, iatmosfera ...
iinkqubo zemveliso yentsimbi oxide ebomvu
Zimbini iinkqubo eziphambili zokuvelisa i-iron oxide red: eyomileyo neyomileyo. Namhlanje siza kujonga kwezi nkqubo zimbini. 1. Kwinkqubo eyomileyo Inkqubo eyomileyo yinkqubo yemveliso ebomvu kunye neyintsimbi yoqobo ebomvu e-China. Izibonelelo zayo yinkqubo yemveliso elula, inkqubo emfutshane ...
Imveliso entsha yentsimbi ye-oxide pigment ...
Shijiazhuang Shencai zombala Factory owasekwa ngo-2003 Sine enkulu Iron oksidi sombala Production Base (Hebei Chengyu sakhi Co., Ltd), ibekwe e Ningjin Salt Chemical Industrial Park, kwiPhondo Hebei, na imichiza park park mveliso, ngokusemthethweni imveliso. Ngeenkqubo ezintathu ...
Ilali yaseGuzhuang, Idolophu yaseShangzhuang, iZowuni yaseLuan, iShijiazhuang, Hebei, China